"Waa in qoraalku ahaadaa Af-Soomaali, ama waa in uu wataa tarjumadiisa oo Af-Soomaali ah"
Halkan ka akhri: Qaabka Loo Qoro Wararka, Faalooyinka iyo Ra'yiga
Ugu horayn waa in qoraalku ahaadaa mid la fahmi karo - higgaadda iyo naxwaha qoraalku waa in ay sax yihiin (marka aad qoraalka qortid ugu yaraan hal mar akhri ama qof kale u dhiib si uu kaaga hubiyo inta aadan dadweynaha usoo tebin) --- AKHRI... oo AKHRI... oo markale AKHRI ... oo HUBI oo markaas kaddib SOO TEBI !!!.
Waa in qoraalku ahaadaa mid ay dad weynuhu wax ka faa'iidayaan ama cilmi laga korosanayo, kuwaas oo muhiimad gooni ah la siin doono.
Waa in aan maqaaladu noqon "qoraallada lagu soo yooyootamo!!" - yooyootanka lama baahin doono.
Waa in aan qof si shakhsiyan ah loogu xad gudbin, waa ladhaliili karaa qofka wax qabadkiisa harer mariya sida saxda ah, waana la amaani karaa qofka wax wanaajiya, laakiin waa in aan marna laga tegin caddaaladda.
Qoraalada cilmi baarista ah waa in ay wataan tixraac ama meelaha laga soo xigtey.
Waana in qoraalku ku qornaadaa Af-Soomaali (eeg hoose).
Waxaan mar labaad xusuusineynaa dhammaan qorayaasha nasoo gaarsiiya qoraalada, in ay shardi tahay in qoraalku uu ku qoranyahay Afka-Soomaali. Qoraalku wuxuu noqon karaa war, war-Saxaafadeed ama war-Murtiyeed, Maqaal, Faalo, iwm.. Dhammaan waa shardi in ay ku qoraadaan Afka Soomaaliga.
Qoraalku marka uu ku qoran yahay luqada Soomaaliga waxa uu si rasmi ah u gaaraya umadda Soomaaliyeed, kuwaas oo fahmaya tibaaxaha, dulucda, ujeedada hadalka iyo macnaha guud ee qoraalka, waa marka uu qoraalkaasi ku qoranyahay luqada afkooda hooyo - Af-Soomaali.
Sidaas darteed ayaan muddo sii horeysey halkaan ku faafinay in haddii qoraal looga gol leeyahay in uu gaaro Soomaalida, ay shardi tahay in uu ku qoranyahay luqadooda Af-Soomaaliga.
Hadii ay dhacdo in qoraalka asalkiisu uu ku qoran yahay luqad kale, waxaa shardi ah in qoraagu uu soo raaciyo qayb u dhiganta qoraalkaas oo ku qoran AfSoomaali ama tarjumada qoraalka.
Waxaan ka afeefaneynaa in aanaan soo deyn doonin qoraal aan wadan qayb Afsoomaali ah amaba aan ku qorayn Afka Soomaaliga. Taasi waxay ka qayb qaadanaysaa dhawrista Afka Soomaaliga si uu san dunida uga suulin . EEG HALKAN
Qoraalada SomaliTalk waxaa loogu soo hagaajin karaa Halkan....
Daabacaad: Oct 14, 2002 | Cusboonaysiin: Dec 7, 2003
Cilmibaaris: uu soo tebiyey Cabdiraxmaan “Barwaaqo” Gujim